Avadiho ireo rakitra PDF ho atiny Dynamic miaraka amin'ny Flip PDF ho an'ny Mac | Avy amin'ny mac aho
Avadiho ho rakitra mavitrika miaraka amin'ny Flip PDF for Mac ny rakitra PDF
Jose Alfocea | | Programa Mac
Ny format PDF (Portable Document Format) dia iray amin'ireo endrika famakiana malaza indrindra sy miely indrindraindrindra amin'ny solosaina finday sy birao na tablety misy habe efijery mety. Na izany aza, satria endrika famakiana izy io, raha ny marina, tsy azo ovaina, mihena be ny tombony azony satria mihena koa ny haben'ny efijery ampiasantsika azy.
Mba hamahana io olana mahazo antsika io Atsipazo PDF, fitaovana ho an'ny Mac (misy dikanteny ho an'ny Windows koa io) izay azontsika atao mamadika mora foana ny rakitra PDF ho rakitra nomerika sariaka toy ny iPhone-ntsika. Ho fanampin'izay, ankehitriny dia afaka mahazo azy amin'ny fihenam-bidy 79% amin'ny vidiny mahazatra isika, noho izany dia fotoana tsara ahazoana fahazoan-dàlana mandritra ny androm-piainana.
1 Ovay ny PDF ho endrika mavitrika kokoa
1.1 Inona no azonao atao amin'ny Flip PDF?
Ovay ny PDF ho endrika mavitrika kokoa
Atsipazo PDF Fitaovana iray atolotry ny mpamorona azy indrindra ho an'ny mpanonta, dokam-barotra, mpamorona ary matihanina hafa mifandraika amin'ireto sehatra ireto, kanefa ny marina dia amin'ny vidiny azo izao, dia tena ilain'ny mpampiasa tsy miankina, mpianatra ary ankapobeny, izay rehetra irinao avadiho ireo rakitra PDF static ho fanontana nomerika mavitrika, miasa kokoa sy manintona kokoa, indrindra raha toa ka natao haparitaka amin'ny Internet izy ireo.
Inona no azonao atao Atsipazo PDF?
Atsipazo PDF manolotra a interface tsotra, intuitive ary mpampiasa-friendly, azonao atao:
Ovay ho toy ny boky nomerika interactive ny rakitra PDF "normal"
Mamorona bokikely nomerika, ebooks, katalaogin'ny vokatra, sy maro hafa.
Mizarà mivantana amin'ny tambajotra sosialy ny zavatra noforoninao
Mamorona kinova amin'ny endrika samihafa: .aoo, .html, .zip, .exe ...
Ary izany rehetra izany dia eo ambanin'ny fitarihana tsotra ary aforeto ny dinamika azonao ampiharina maodely maherin'ny 100, lohahevitra 400 ary fiaviana 700 anisan'izany azonao atao ny misafidy.
Ankehitriny, noho ny fampiroboroboana «Talata roa dolara», afaka mahazo a fahazoan-dàlana mandrakizay miaraka amin'ny fihenam-bidy 79% eto, izany hoe hanana fahazoana miditra amin'ireo fanavaozana kely ianao ary fampidirana ireo fiasa sy fiasa vaovao mandrakizay $ 19,99 ihany fa tsy ny $ 99,99 mahazatra. Inona koa, hitohy mandritra ny fito andro ny fampiroboroboana, ka mbola manana fotoana handinihana sy hanombanana raha Atsipazo PDF no vokatra ilainao. Mandritra izany fotoana izany, avelako amin'ity horonan-tsary fampiroboroboana ity ianao:
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Programa Mac » Avadiho ho rakitra mavitrika miaraka amin'ny Flip PDF for Mac ny rakitra PDF
Manompo dia hoy izy:
Te-hilaza aho fa misandoka ilay orinasa tompon'ny rindrambaiko FlipPdf. Ary ny zavatra ratsy indrindra misy pejy web maro toa ny anao amin'ny Internet izay miresaka zava-mahatalanjona momba ilay rindranasa fotsiny, ary tsy nisy nahita izay tena ao ambadiky ny fampiharana. Mitranga fa ny fampiharana dia tena tsara.
Aiza ary ny hazandrano? Miara-miasa amin'ny marika isan-karazany izy ireo.
PUBHTML5, FLIPHTML5, FLIPBUILDER ankoatry ny hafa.
Miova hatrany ny fepetra. Amin'ny ankabeazany, izy ireo dia mila mandoa vola isam-bolana na isan-taona ianao fa toy ny hofan-trano. Ary misafidy ny iray amin'ireo marika ireo izy ireo izay mandoa ny fepetra ary maharitra mandritra ny androm-piainana ny fahazoan-dàlana, mampifantoka ny fividianana rehetra amin'izany safidy izany izy ireo.
Rehefa afaka herintaona dia tsapanao fa tsy izany no izy ary avy eo ianao mitaraina amin'izy ireo, ary tamin'izay dia nanova ny adiresy mailaka sy ny adiresy ara-nofo izy ireo ary tsy misy olona mahita azy ireo.
Tsy mitombina ny hoe tsy maintsy ataon'izy ireo ity hosoka ity, satria tena tsara ilay fampiharana.
Valiny tamin'i servando
Mirror Mac Screen amin'ny Smart TV